မျိုးဆက်သစ် Wi-Fi နည်း ပညာ Wi-Fi6– Internet Journal |
မျိုးဆက်သစ် Wi-Fi နည်း ပညာ Wi-Fi 6
May 06, 2019Comments Off on မျိုးဆက်သစ် Wi-Fi နည်း ပညာ Wi-Fi 60123
Wi-Fi တွေ ပိုမြန်လာတော့မယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ တကယ်မြန်လာတော့မှာပါ။ ဒါကျွန်တော်တို့ အားလုံးအတွက် သတင်းကောင်းပါပဲ။ အင်တာနက်သုံးရာမှာ ပိုမြန်လေ ပိုကောင်းလေပဲ မဟုတ်ပါလား။ မြန်လွန်းလို့ လိုက်မမှီတော့ဘူးဆိုတာတော့ အခုထိမကြားမိသေးပါဘူး။
နောက်ဆုံးပေါ် မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ Wi-Fi6က ပြောရရင် အမြန်နှုန်းတစ်ခုထဲပဲ ပိုကောင်းလာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခြား တိုးတက်လာတဲ့ အပိုင်းတွေအများကြီးပါပဲ။ ဒါကြောင့် Wi-Fi6ဟာ Future-proof နည်းပညာသစ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Wi-Fi6သာ သုံးမယ်ဆို နောက်နှစ်တွေ အများကြီးအထိ ခေတ်မီနေမှာပါ။ ကဲ Wi-Fi6ကတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ နည်းပညာထုတ်ကုန်သစ်တွေမှာ ပါဝင်လာနေပါပြီ။ လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာ ဖုန်းအသစ်ဝယ်မယ်ဆိုရင် Wi-Fi6Certified ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးကို တွေ့လာရတော့မှာပါ။ ကဲ ဒီ Wi-Fi6မှာ ဘာတွေထူးလာသလဲ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။
Wi-Fi6ဆိုတာ
Wi-Fi6ဟာ နောက်ဆုံးပေါ် Wi-Fi မျိုးဆက်နည်း ပညာတစ်ခုပါပဲ။ ဒါဆိုအရင်မျိုး ဆက်တွေကရော။ ဒီ့မတိုင်ခင် နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တာကတော့ Wi-Fi5ပါ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကထွက် ပေါ်ခဲ့တာပါ။ အဲ့အရင် Wi-Fi4ကတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ထွက်ခဲ့တာပါ။ တစ်ခုရှိတာက လက်ရှိ Router တွေနဲ့ ဖုန်းတွေမှာ သွား ကြည့်ရင် Wi-Fi 4, Wi-Fi5ရယ်လို့ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့အစား ဘာတွေမှန်းမသိတဲ့ ဂ ဏန်းတွေနဲ့ အက္ခရာအတွဲတွေပဲ မြင်ရမှာပါ။ ဥပမာ 802.11n ဆိုရင် ဒါ Wi-Fi4ကို ပြောတာပါ။ 802.11ac ဆိုရင်တော့ Wi-Fi5ကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲ့လိုသာ ရေးမယ်ဆို အခု Wi-Fi6ဟာ 802.11ax ဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတို့ တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ ဒီအမည်ပေးစနစ်ဟာ ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ သာမန်သုံးစွဲသူတွေ နားလည်နိုင်ဖို့၊ နှိုင်းယှဉ်နိုင်ဖို့ရာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲ Wi-Fi Alliance အဖွဲ့ကြီးက ဒီနှစ်မှာ Wi-Fi အမည်ပေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲမယ်လို့ ကြေညာခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းထုတ်ကုန်တွေမှာ Wi-Fi ကို နံပါတ်နဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မြင်လာရတော့မှာပါ။
ဒါကတော့ မျိုးဆက်သစ်တစ်ခုထွက်တိုင်း လူတွေ အရင်မေးကြတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ အတိုဆုံးဖြေရရင်တော့ Max. speed က 9.6 Gbps ပါ။ ဒါ Wi-Fi5ရဲ့ 3.5 Gbps ကနေ တိုးတက်လာတာပါ။
အပြည့်အစုံဖြေရမယ် ဆိုရင်တော့ ဒါက သီအိုရီအရ ရနိုင်မယ့် အမြင့်ဆုံး Speed လို့ဖြေရမှာပါ။ လက်တွေ့မှာတော့ ဒီလောက်ထိ မရနိုင်ပါဘူး။ အဲ့လောက် ရရင်တောင်မှ အဲ့လောက်မြန်ဖို့ လိုလို့လားလို့ မေးရမှာပါ။ US မှာ တောင်မှ Typical Download Speed က 72 Mbps လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ Theoretical Maximum Speed ရဲ့ (၁) ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အရင်မျိုးဆက်တွေ ထက် Theoretical Speed အများကြီး တိုးလာတယ်ဆိုတာကိုက အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီ 9.6 Gbps အားလုံးက Device တစ်ခုတည်းကို သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Network နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Device တွေ အကုန်ခွဲပေးရမှာပါ။ ပြောရရင် Device တစ်ခုချင်းစီအတွက် Speed ကလည်း အရင်မျိုးဆက်တွေထက် ပိုမြန်လာမှာပါ။
Wi-Fi6ရဲ့ အကြီးမားဆုံး အားသာချက်ကို မြင်တွေ့ရမယ့် အချိန်ကတော့ ကွန်ရက်တစ်ခုတည်းကို Device တွေအများကြီး ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အချိန်ပါပဲ။ ဒါမျိုးကို Wi-Fi Free ပေးတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ဟိုတယ်တွေနဲ့ လေဆိပ်တို့လို နေရာတွေမှာ ကြုံနေကြပါပဲ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ Wi-Fi6ဟာ Device တစ်ခုချင်းစီအတွက် Speed ကျသွားတာမျိုးမရှိဘဲ ကွန်ရက်ကို အကောင်းဆုံး ကိုင်တွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Network Congestion ကို အရင်မျိုးဆက်တွေထက်ပိုပြီး အဆင်ပြေပြေနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီအချက်က တော်တော်လေး အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Internet of Things (IoTs) တွေ ခေတ်စားလာတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ Network Congestion ကို ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့ရာ အရင်ကထက် ပိုအရေးကြီး လာပါတယ်။ Wi-Fi5စ ပေါ်တုန်းကဆိုရင် US က အိမ်တစ်အိမ်မှာ Device ငါးခုပဲပျမ်းမျှရှိပါတယ်။ အဲအခုချိန်မှာတော့ ကိုးခုအထိကို တိုးလာတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ နောက်နှစ်တွေမှာဆို Wi-Fi ကွန်ရက်နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ Device ပေါင်း (၅၀) လောက်အထိကို တိုးလာဦးမယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
ဒီတိုးလာတဲ့ Device တိုင်းဟာ Wi-Fi ကွန်ရက်မှာ သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် Data တွေ download, upload လုပ်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် Wi-Fi Router ကတော့ တစ်ချိန်မှာ Device တစ်ခုနဲ့ပဲ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Wi-Fi ချိတ်ထားတဲ့ Device တွေ များလာလေ၊ ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးရဲ့ Speed က ကျသွားလေလေပါပဲ။
အခု Wi-Fi6ကတော့ ဒီအားနည်းချက်ကို နည်းပညာသစ်တွေနဲ့ ဖြေရှင်းပေးမှာပါ။ ဒီနည်းပညာတွေကြောင့် Wi-Fi Router ဟာ တစ်ချိန်တည်းမှာ Device အများအပြားကို တစ်ပြိုင်တည်း ချိတ်ဆက်နိုင်လာပါတယ်။ Broadcast တစ်ခုတည်းနဲ့ Device တွေ အများကြီးကို Data တွေ တစ်ပြိုင်တည်း ပေးပို့နိုင်မှာပါ။ 8×8 MU-MIMO, OFDMA, Beamforming တို့လို နည်းပညာတွေဟာ Wi-Fi6အတွက် တကယ့်အရေးပါတဲ့ နည်းပညာတွေပါပဲ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ရှုပ်ကုန်မှာစိုးလို့ ဒီနေရာမှာ မဖော်ပြတော့ပါဘူး။
ဒါဆို Device တစ်ခုချင်းစီ အတွက်ရော ဘယ်လောက်မြန်လာမှာလဲ
စိတ်မကောင်းစရာပဲ ဒီမေးခွန်းအတွက် တိကျတဲ့အဖြေတော့ မရှိပါဘူး။ အခြေအနေပေါ်မူ တည်တယ်လို့ပဲ ဖြေရပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံး ပြောဖို့လိုတာက တော့ Wi-Fi6ဟာ အရင်က ထက်ပိုပြီးတော့ ဖလန်းဖလန်းထ အောင် မြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ အဲ့အစား Wi-Fi6Router နဲ့ ချိတ်ထားတဲ့ Device တွေ Wi-Fi5Router နဲ့ ချိတ်တာထက် အနည်းငယ် လောက်ပဲ ပိုမြန်လာမှာပါ။
အဲအရင်မျိုးဆက်တွေနဲ့ သိသိသာသာ ကွဲထွက်သွားမယ့် အချိန်ကတော့ အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို Device တွေ အများအပြား ကွန်ရက်တစ်ခုတည်းကို တစ်ပြိုင်တည်း ချိတ်ထားတဲ့အချိန်ပါပဲ။ လက်ရှိ Router တွေနဲ့ဆို ဒီလိုအခြေခအနေမှာ ကွန်ရက် Speed က ထိုးကျသွားမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ Wi-Fi6Router တွေကတော့ ကွန်ရက်အရည်အသွေးကို အပြောင်းအလဲ သိပ်မရှိအောင် ထိန်းထားပေးနိုင်မှာပါ။
ပြောရရင် Device တွေဟာ Wi-Fi6မှာ အခုရနေတဲ့ Speed ထက်ပိုပြီး အဆများစွာမြန်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့အစား ဘယ်ကွန်ရက်မှာ သုံးသုံး၊ Device ဘယ်လောက် ချိတ်ထားချိတ်ထား မူလအမြန်နှုန်းကို ထိန်းထားနိုင်မှာပါ။ ဥပမာ အိမ်မှာတစ်ယောက်က Netflix ကြည့်နေမယ်၊ တစ်ယောက်က အွန်လိုင်းဂိမ်းဆော့နေမယ်၊ နောက်တစ်ယောက်က Video Chatting လုပ်နေမယ်၊ ပြီးတော့ အိမ်ထဲက Smart Gadget တွေက တစ်ပြိုင်တည်း checking လုပ်နေမယ်၊ ဒီလိုအခြေအနေမှာဘယ် Device မှာမှ Connection ကျ သွားတာမျိုး မဖြစ်အောင် Wi-Fi6က ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်။
Wi-Fi6မှာ ပါဝင်လာတဲ့ နောက်ထပ်နည်းပညာ သစ်တစ်ခုကတော့ Target Wake Time ဆိုတဲ့ နည်းပညာပါ။ ဒီနည်းပညာက Device တွေကို ဘယ်အချိန်မှာ Router နဲ့ ဆက်သွယ်ရမယ် ဆိုတာကို စီမံခန့်ခွဲပေးပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ Device တွေရဲ့ Antenna ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်ကို တိုတောင်းစေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး မလိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ လှိုင်းတွေ လွှင့်နေစရာ မလိုတော့တာ ကြောင့် ဘက်ထရီကို ချွေတာပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒီနည်းပညာက Internet Access ကို အချိန်တိုင်းလိုအပ်တဲ့ Laptop တွေ၊ Smartphone တွေအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကက သေးငယ်တဲ့ low-power device တွေ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ Smart Gadget တွေလိုမျိုးပါ။ ဒီ Device တွေရဲ့ ဘက်ထရီက သေးငယ်တာကြောင့် ပါဝါကို ချွေတာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Wi-Fi6က ဒါကို ဖြည့် ဆည်းပေးနိင်ပါတယ်။
Wi-Fi ကွန်ရက်အကြောင်းပြောရင် ကွန်ရက်လုံခြုံရေးကလည်း မပြောမဖြစ်ပါဘဲ။ Wi-Fi ကွန်ရက်ရဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်တွေဖြစ်တဲ့ WPA, WPA2 တို့ကို လက်ရှိအများဆုံး သုံးနေကြပါတယ်။ မနှစ်ကတော့ Wi-Fi လုံခြုံရေးစနစ် အသစ်ဖြစ်တဲ့ WPA3 ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ WPA3ဟာ အရင်စနစ်တွေထက် ပိုပြီးလုံခြုံပါတယ်။ Hacker တွေ ချိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ရာ ပိုခက်လာပါတယ်။ တကယ်လို့ ဝင်နိုင်ခဲ့ရင်တောင် Data တွေကို Encrypt လုပ်ထားတာကြောင့် Hacker တွေအတွက် သိပ်အသုံးမဝင်လှပါဘူး။
တကယ်တန်းပြောမယ်ဆိုရင် WPA3 က Wi-Fi6မှာပဲ ပါတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Wi-Fi5Router တွေလည်း WPA3 သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မသုံးမနေရ သတ်မှတ်ထားတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု Wi-Fi6မှာတော့ WPA3 သုံးမှသာ Certified ဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် Wi-Fi6Certified Router တွေမှာ WPA3 ကို default အနေနဲ့ သုံးတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
Wi-Fi6က အခုမှ စပေါ်ကာစပါ
ဒီ Wi-Fi6ကို ထောက် ပံ့တဲ့ device တွေဟာ အခုနှစ်ပိုင်းလေး မှာမှ စတင်ထွက်ပေါ်လာ တာပါ။ အခုချိန်မှာ Wi-Fi6Router တွေ ဝယ်လို့ရနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဈေးကြီးနေပါသေးတယ်။ တစ်ချို့ Laptop တွေမှာလည်း Wi-Fi6ပါဝင်လာပါပြီ။ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။
စမတ်ဖုန်းတွေမှာလည်း ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲ Wi-Fi6ကို စတင်မြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။ Qualcomm ရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ် Flagship Processor ဖြစ်တဲ့ Snapdragon 855 မှာ Wi-Fi6အထောက်အပံ့ ပါဝင်လာပါတယ်။ Samsung ရဲ့ Galaxy S10 မှာ Wi-Fi6ပါဝင်လာပါပြီ။ ဒီ့နောက်ပိုင်းမှာထွက်မယ့် ဖုန်းတွေမှာလည်း Wi-Fi6ကို ထည့်သွင်းလာကြမှာပါ။ အဲ့အချိန်ကျရင်တော့ ပိုတည်ငြိမ်ပြီး လုံခြုံရေးပိုကောင်းလာတဲ့ Wi-Fi မျိုးဆက်သစ်ကို စတင်ခံစားနိုင်ကြတော့မှာပါ။
Wi-Fi တှေ ပိုမွနျလာတော့မယျ။ ဟုတျကဲ့၊ တကယျမွနျလာ တော့မှာပါ။ ဒါကြှနျတျောတို့ အားလုံးအတှကျ သတငျးကောငျးပါပဲ။ အငျတာနကျသုံးရာမှာ ပိုမွနျလေ ပိုကောငျးလပေဲ မဟုတျပါလား။ မွနျလှနျးလို့ လိုကျမမှီတော့ဘူးဆိုတာတော့ အခုထိမကွားမိသေးပါဘူး။
နောကျဆုံးပျေါ မြိုးဆကျဖွဈတဲ့ Wi-Fi6က ပွောရရငျ အမွနျနှုနျးတဈခုထဲပဲ ပိုကောငျးလာတာတော့ မဟုတျပါဘူး။ တဈခွား တိုးတကျလာတဲ့ အပိုငျးတှအေမြားကွီးပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ Wi-Fi6ဟာ Future-proof နညျးပညာသဈလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ ဆိုလိုတာက Wi-Fi6သာ သုံးမယျဆို နောကျနှဈတှေ အမြားကွီးအထိ ခတျေမီနမှောပါ။ ကဲ Wi-Fi6ကတော့ ဒီနှဈထဲမှာပဲ နညျးပညာထုတျကုနျသဈတှမှော ပါဝငျလာနပေါပွီ။ လာမယျ့နှဈအတှငျးမှာ ဖုနျးအသဈဝယျမယျဆိုရငျ Wi-Fi6Certified ဆိုတဲ့ စာတနျးလေးကို တှလေ့ာရတော့မှာပါ။ ကဲ ဒီ Wi-Fi6မှာ ဘာတှထေူးလာသလဲ လလေ့ာကွညျ့ကွရအောငျပါ။
Wi-Fi6ဟာ နောကျဆုံးပျေါ Wi-Fi မြိုးဆကျနညျး ပညာတဈခုပါပဲ။ ဒါဆိုအရငျမြိုး ဆကျတှကေရော။ ဒီ့မတိုငျခငျ နောကျဆုံးထှကျခဲ့တာကတော့ Wi-Fi5ပါ။ ၂၀၁၄ ခုနှဈကထှကျ ပျေါခဲ့တာပါ။ အဲ့အရငျ Wi-Fi4ကတော့ ၂၀၀၉ ခုနှဈမှာ ထှကျခဲ့တာပါ။ တဈခုရှိတာက လကျရှိ Router တှနေဲ့ ဖုနျးတှမှော သှား ကွညျ့ရငျ Wi-Fi 4, Wi-Fi5ရယျလို့ တှရေ့မှာ မဟုတျပါဘူး။ အဲ့အစား ဘာတှမှေနျးမသိတဲ့ ဂ ဏနျးတှနေဲ့ အက်ခရာအတှဲတှပေဲ မွငျရမှာပါ။ ဥပမာ 802.11n ဆိုရငျ ဒါ Wi-Fi4ကို ပွောတာပါ။ 802.11ac ဆိုရငျတော့ Wi-Fi5ကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲ့လိုသာ ရေးမယျဆို အခု Wi-Fi6ဟာ 802.11ax ဖွဈပါတယျ။
စာဖတျသူတို့ တှတေဲ့အတိုငျးပဲ ဒီအမညျပေးစနဈဟာ ရှုပျထှေးပွီးတော့ သာမနျသုံးစှဲသူတှေ နားလညျနိုငျဖို့၊ နှိုငျးယှဉျနိုငျဖို့ရာ မလှယျကူပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ပဲ Wi-Fi Alliance အဖှဲ့ကွီးက ဒီနှဈမှာ Wi-Fi အမညျပေးစနဈကို ပွောငျးလဲမယျလို့ ကွညောခဲ့တာပါ။ နောကျပိုငျးထုတျကုနျတှမှော Wi-Fi ကို နံပါတျနဲ့ ရိုးရိုးရှငျးရှငျး မွငျလာရတော့မှာပါ။
ဒါကတော့ မြိုးဆကျသဈတဈခုထှကျတိုငျး လူတှေ အရငျမေးကွတဲ့ မေးခှနျးပါပဲ။ အတိုဆုံးဖွရေရငျတော့ Max. speed က 9.6 Gbps ပါ။ ဒါ Wi-Fi5ရဲ့ 3.5 Gbps ကနေ တိုးတကျလာတာပါ။
အပွညျ့အစုံဖွရေမယျ ဆိုရငျတော့ ဒါက သီအိုရီအရ ရနိုငျမယျ့ အမွငျ့ဆုံး Speed လို့ဖွရေမှာပါ။ လကျတှမှေ့ာတော့ ဒီလောကျထိ မရနိုငျပါဘူး။ အဲ့လောကျ ရရငျတောငျမှ အဲ့လောကျမွနျဖို့ လိုလို့လားလို့ မေးရမှာပါ။ US မှာ တောငျမှ Typical Download Speed က 72 Mbps လောကျပဲ ရှိပါတယျ။ ဒါဟာ Theoretical Maximum Speed ရဲ့ (၁) ရာခိုငျနှုနျးပဲ ရှိပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ အရငျမြိုးဆကျတှေ ထကျ Theoretical Speed အမြားကွီး တိုးလာတယျဆိုတာကိုက အရေးကွီးပါတယျ။ ဒီ 9.6 Gbps အားလုံးက Device တဈခုတညျးကို သှားမှာမဟုတျပါဘူး။ Network နဲ့ ခြိတျဆကျထားတဲ့ Device တှေ အကုနျခှဲပေးရမှာပါ။ ပွောရရငျ Device တဈခုခငျြးစီအတှကျ Speed ကလညျး အရငျမြိုးဆကျတှထေကျ ပိုမွနျလာမှာပါ။
Wi-Fi6ရဲ့ အကွီးမားဆုံး အားသာခကျြကို မွငျတှရေ့မယျ့ အခြိနျကတော့ ကှနျရကျတဈခုတညျးကို Device တှအေမြားကွီး ခြိတျဆကျထားတဲ့ အခြိနျပါပဲ။ ဒါမြိုးကို Wi-Fi Free ပေးတဲ့ စားသောကျဆိုငျတှေ၊ ဟိုတယျတှနေဲ့ လဆေိပျတို့လို နရောတှမှော ကွုံနကွေပါပဲ။ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးမှာ Wi-Fi6ဟာ Device တဈခုခငျြးစီအတှကျ Speed ကသြှားတာမြိုးမရှိဘဲ ကှနျရကျကို အကောငျးဆုံး ကိုငျတှယျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ Network Congestion ကို အရငျမြိုးဆကျတှထေကျပိုပွီး အဆငျပွပွေနေဲ့ ကိုငျတှယျဖွရှေငျးနိုငျပါတယျ။
ဒီအခကျြက တျောတျောလေး အရေးကွီးပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ Internet of Things (IoTs) တှေ ခတျေစားလာတဲ့ ဒီနခေ့တျေမှာ Network Congestion ကို ကောငျးကောငျး ကိုငျတှယျနိုငျဖို့ရာ အရငျကထကျ ပိုအရေးကွီး လာပါတယျ။ Wi-Fi5စ ပျေါတုနျးကဆိုရငျ US က အိမျတဈအိမျမှာ Device ငါးခုပဲပမျြးမြှရှိပါတယျ။ အဲအခုခြိနျမှာတော့ ကိုးခုအထိကို တိုးလာတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။ နောကျနှဈတှမှောဆို Wi-Fi ကှနျရကျနဲ့ ခြိတျဆကျနိုငျတဲ့ Device ပေါငျး (၅၀) လောကျအထိကို တိုးလာဦးမယျလို့လညျး ခနျ့မှနျးထားကွပါတယျ။
ဒီတိုးလာတဲ့ Device တိုငျးဟာ Wi-Fi ကှနျရကျမှာ သူ့ထကျငါ အပွိုငျအဆိုငျ Data တှေ download, upload လုပျကွမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ Wi-Fi Router ကတော့ တဈခြိနျမှာ Device တဈခုနဲ့ပဲ အပွနျအလှနျ ဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ Wi-Fi ခြိတျထားတဲ့ Device တှေ မြားလာလေ၊ ကှနျရကျတဈခုလုံးရဲ့ Speed က ကသြှားလလေပေါပဲ။
အခု Wi-Fi6ကတော့ ဒီအားနညျးခကျြကို နညျးပညာသဈတှနေဲ့ ဖွရှေငျးပေးမှာပါ။ ဒီနညျးပညာတှကွေောငျ့ Wi-Fi Router ဟာ တဈခြိနျတညျးမှာ Device အမြားအပွားကို တဈပွိုငျတညျး ခြိတျဆကျနိုငျလာပါတယျ။ Broadcast တဈခုတညျးနဲ့ Device တှေ အမြားကွီးကို Data တှေ တဈပွိုငျတညျး ပေးပို့နိုငျမှာပါ။ 8×8 MU-MIMO, OFDMA, Beamforming တို့လို နညျးပညာတှဟော Wi-Fi6အတှကျ တကယျ့အရေးပါတဲ့ နညျးပညာတှပေါပဲ။ အသေးစိတျကိုတော့ ရှုပျကုနျမှာစိုးလို့ ဒီနရောမှာ မဖျောပွတော့ပါဘူး။
ဒါဆို Device တဈခုခငျြးစီ အတှကျရော ဘယျလောကျမွနျလာမှာလဲ
စိတျမကောငျးစရာပဲ ဒီမေးခှနျးအတှကျ တိကတြဲ့အဖွတေော့ မရှိပါဘူး။ အခွအေနပေျေါမူ တညျတယျလို့ပဲ ဖွရေပါလိမျ့မယျ။ ပထမဆုံး ပွောဖို့လိုတာက တော့ Wi-Fi6ဟာ အရငျက ထကျပိုပွီးတော့ ဖလနျးဖလနျးထ အောငျ မွနျလာမှာမဟုတျဘူးဆိုတာပါပဲ။ အဲ့အစား Wi-Fi6Router နဲ့ ခြိတျထားတဲ့ Device တှေ Wi-Fi5Router နဲ့ ခြိတျတာထကျ အနညျးငယျ လောကျပဲ ပိုမွနျလာမှာပါ။
အဲအရငျမြိုးဆကျတှနေဲ့ သိသိသာသာ ကှဲထှကျသှားမယျ့ အခြိနျကတော့ အထကျမှာ ပွောခဲ့သလို Device တှေ အမြားအပွား ကှနျရကျတဈခုတညျးကို တဈပွိုငျတညျး ခြိတျထားတဲ့အခြိနျပါပဲ။ လကျရှိ Router တှနေဲ့ဆို ဒီလိုအခွခေအနမှော ကှနျရကျ Speed က ထိုးကသြှားမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ Wi-Fi6Router တှကေတော့ ကှနျရကျအရညျအသှေးကို အပွောငျးအလဲ သိပျမရှိအောငျ ထိနျးထားပေးနိုငျမှာပါ။
ပွောရရငျ Device တှဟော Wi-Fi6မှာ အခုရနတေဲ့ Speed ထကျပိုပွီး အဆမြားစှာမွနျသှားမှာ မဟုတျပါဘူး။ အဲ့အစား ဘယျကှနျရကျမှာ သုံးသုံး၊ Device ဘယျလောကျ ခြိတျထားခြိတျထား မူလအမွနျနှုနျးကို ထိနျးထားနိုငျမှာပါ။ ဥပမာ အိမျမှာတဈယောကျက Netflix ကွညျ့နမေယျ၊ တဈယောကျက အှနျလိုငျးဂိမျးဆော့နမေယျ၊ နောကျတဈယောကျက Video Chatting လုပျနမေယျ၊ ပွီးတော့ အိမျထဲက Smart Gadget တှကေ တဈပွိုငျတညျး checking လုပျနမေယျ၊ ဒီလိုအခွအေနမှောဘယျ Device မှာမှ Connection ကြ သှားတာမြိုး မဖွဈအောငျ Wi-Fi6က ထောကျပံ့နိုငျပါတယျ။
Wi-Fi6မှာ ပါဝငျလာတဲ့ နောကျထပျနညျးပညာ သဈတဈခုကတော့ Target Wake Time ဆိုတဲ့ နညျးပညာပါ။ ဒီနညျးပညာက Device တှကေို ဘယျအခြိနျမှာ Router နဲ့ ဆကျသှယျရမယျ ဆိုတာကို စီမံခနျ့ခှဲပေးပါတယျ။ ရလဒျအနနေဲ့ Device တှရေဲ့ Antenna ဖှငျ့ထားတဲ့အခြိနျကို တိုတောငျးစပေါတယျ။ ဒီလိုမြိုး မလိုအပျတဲ့ အခြိနျမှာ လှိုငျးတှေ လှငျ့နစေရာ မလိုတော့တာ ကွောငျ့ ဘကျထရီကို ခြှတောပွီးသား ဖွဈသှားပါတယျ။
ဒီနညျးပညာက Internet Access ကို အခြိနျတိုငျးလိုအပျတဲ့ Laptop တှေ၊ Smartphone တှအေတှကျ မဟုတျပါဘူး။ အဓိကက သေးငယျတဲ့ low-power device တှေ အတှကျ ဖွဈပါတယျ။ ခုနက ပွောခဲ့တဲ့ Smart Gadget တှလေိုမြိုးပါ။ ဒီ Device တှရေဲ့ ဘကျထရီက သေးငယျတာကွောငျ့ ပါဝါကို ခြှတောဖို့ လိုအပျပါတယျ။ Wi-Fi6က ဒါကို ဖွညျ့ ဆညျးပေးနိငျပါတယျ။
Wi-Fi ကှနျရကျအကွောငျးပွောရငျ ကှနျရကျလုံခွုံရေးကလညျး မပွောမဖွဈပါဘဲ။ Wi-Fi ကှနျရကျရဲ့ လုံခွုံရေးစနဈတှဖွေဈတဲ့ WPA, WPA2 တို့ကို လကျရှိအမြားဆုံး သုံးနကွေပါတယျ။ မနှဈကတော့ Wi-Fi လုံခွုံရေးစနဈ အသဈဖွဈတဲ့ WPA3 ထှကျခဲ့ပါတယျ။ WPA3ဟာ အရငျစနဈတှထေကျ ပိုပွီးလုံခွုံပါတယျ။ Hacker တှေ ခြိုးဖောကျဝငျရောကျဖို့ရာ ပိုခကျလာပါတယျ။ တကယျလို့ ဝငျနိုငျခဲ့ရငျတောငျ Data တှကေို Encrypt လုပျထားတာကွောငျ့ Hacker တှအေတှကျ သိပျအသုံးမဝငျလှပါဘူး။
တကယျတနျးပွောမယျဆိုရငျ WPA3 က Wi-Fi6မှာပဲ ပါတာတော့ မဟုတျပါဘူး။ Wi-Fi5Router တှလေညျး WPA3 သုံးနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မသုံးမနရေ သတျမှတျထားတာမြိုးတော့ မဟုတျပါဘူး။ အခု Wi-Fi6မှာတော့ WPA3 သုံးမှသာ Certified ဖွဈမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ Wi-Fi6Certified Router တှမှော WPA3 ကို default အနနေဲ့ သုံးတာကို မွငျတှရေ့မှာပါ။
Wi-Fi6က အခုမှ စပျေါကာစပါ
ဒီ Wi-Fi6ကို ထောကျ ပံ့တဲ့ device တှဟော အခုနှဈပိုငျးလေး မှာမှ စတငျထှကျပျေါလာ တာပါ။ အခုခြိနျမှာ Wi-Fi6Router တှေ ဝယျလို့ရနပေါပွီ။ ဒါပမေယျ့ ဈေးကွီးနပေါသေးတယျ။ တဈခြို့ Laptop တှမှောလညျး Wi-Fi6ပါဝငျလာပါပွီ။ ကယျြကယျြပွနျ့ ပွနျ့တော့ မဟုတျသေးပါဘူး။
စမတျဖုနျးတှမှောလညျး ဒီနှဈအတှငျးမှာပဲ Wi-Fi6ကို စတငျမွငျတှရေ့တော့မှာပါ။ Qualcomm ရဲ့ နောကျဆုံးထုတျ Flagship Processor ဖွဈတဲ့ Snapdragon 855 မှာ Wi-Fi6အထောကျအပံ့ ပါဝငျလာပါတယျ။ Samsung ရဲ့ Galaxy S10 မှာ Wi-Fi6ပါဝငျလာပါပွီ။ ဒီ့နောကျပိုငျးမှာထှကျမယျ့ ဖုနျးတှမှောလညျး Wi-Fi6ကို ထညျ့သှငျးလာကွမှာပါ။ အဲ့အခြိနျကရြငျတော့ ပိုတညျငွိမျပွီး လုံခွုံရေးပိုကောငျးလာတဲ့ Wi-Fi မြိုးဆကျသဈကို စတငျခံစားနိုငျကွတော့မှာပါ။
Previous Post၂၀၁၉ ခုနှစ် အစောပိုင်းအတွင်း စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ကို Apple ဆက်လက်လွှမ်းမိုးထား
Next Postအီး စီးကရက်ကို ပိတ်ပင် တားမြစ်ကြတော့မှာလား